သင်မသိသေးတဲ့ Free Fire Easter Eggs အကြောင်းများ အတွက် Booyah လို့ အောင်လိုက်ပါ! | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire သင်မသိသေးတဲ့ ...
သင်မသိသေးတဲ့ Free Fire Easter Eggs အကြောင်းများ အတွက် Booyah လို့ အောင်လိုက်ပါ!
Online Battle Royale Scene တွေမှာ Free Fire က နာမည်အလွန်ကြီးနေပါတယ်။ ဒီနှစ်တွေမှာ Free Fire ကို ဒေါင်းလုပ်သူပေါင်း သန်းဂဏန်းရှိပြီး ကစားသမားတွေအားလုံးက ဂိမ်းရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကို ရင်းနှီးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်မသိသေးလောက်တဲ့ ဒီ သိထားသင့်တဲ့ အချက်ကလေးတွေနဲ့တွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
၁။ Garena Free Fire က 72 Billions Views နဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ Youtube တွင် တတိယ လူကြည့် အများဆုံး ဂိမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂။ Booyah! ဒီ နာမည်အကြီးဆုံး စကားစုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သင်သိပါသလား? Booyah ဆိုတာက စိတ်လှုပ်ရှားတာ ၊ ပျော်ရွှင်တာ နဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့တာတို့ကို ပြောတာပါ။ ဒါကတော့ လူ ၅၀ ကျော်နဲ့ Deathmatch တွေအားလုံးကို ရှင်သန်ပြီးချိန်မှာ ဒီ စကားစုက အသုံးပြုဖို့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Free Fire ကို အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဗီယက်နမ် တို့မှာ အများဆုံးကစားကြပါတယ်။
၄။ Free Fire ပြိုင်ပွဲများမှ အနိုင်ရရှိသည့်ငွေ အများဆုံး ရရှိသော နိုင်ငံမှာ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀၇,၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Free Fire က Character တစ်ချို့က တကယ့် အပြင်မှ နယ်ပယ်တစ်ခုစီက နာမည်ကြီးသောသူများ ကို အခြေခံထားတာပါ။ ထို Character များထဲမှ တစ်ချို့ဟာတွေကတော့ နာမည်ကြီး ဘောလုံးသမား Cristiano Ronaldo အဖြစ် Chrono ၊ ဘရာဇီး Dj Alok အဖြစ် Alok နှင့် အင်ဒိုနီးရှား သရုပ်ဆောင် နှင့် ကိုယ်ခံပညာရှင် Joe Taslim ကတော့ Jota တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Free Fire ကို စတင်ထုတ်တုန်းကတော့ ဒေါင်းလုပ်ရန် ၅၆ MB သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ Android မှာ ၇၀၀ MB အထိ လိုအပ်ပြီး iOS မှာတော့ ၁.၇ GB အထိလိုအပ်ပါတယ်။
၇။ ပထမဆုံး Elite Pass (Kitsune) ကို ဇွန်လ ၂၀၁၈ မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၈။ Garena ၏ ပိုင်ရှင် Forrest Li က အွန်လိုင်းဂိမ်းများကြောင့် Billionare ဖြစ်လာတဲ့ ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး Fortnite ကို စတင်ခဲ့တဲ့ Tim Sweeney ကတော့ ပထမဆုံး အွန်လိုင်းဂိမ်းကြောင့် Billionaire ဖြစ်လာတာပါ။
၉။ မြောက်ပိုင်း အာဖရိက မှ နာမည်ကြီး Kalahari Desert အခြေခံပြီး Kalahari မြေပုံကို ပြုလုပ်ထားတာပါ။
၁၀။ Monster Truck ကို ဂိမ်းထဲမှာ သင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Airdrop ကို ရှာတွေ့မှ ရမှာပါနော်။
၁၁။ Free Fire က နာမည်ကြီး ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ သူက ကစားသမားများ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေစေဖို့ Hardware ပိုင်း နိမ့်တဲ့ ဖုန်းတွေ အတွက်တောင် အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ထားတာပါ။
၁၂။ သင်က Marvel ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်လား? Maxim က Qucksilver ကို အခြေခံထားတာ သင်သိပါသလား? ပလက်တီနမ်ရောင် ဆံပင် ၊ ခေါင်းပေါ်မှ မျက်မှန် ၊ မြန်ဆန်မှု။ Maxim ရဲ့ ဘေးမှာ Pietro Maximoff ကိုထည့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ သင်ကြည့်လိုက်ပါ။
၁၃။ ပထမဆုံး Free Fire ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကတော့ အင်ဒိုနီးရှားက EVOS Captial ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ၂၀၁၉ အဖွင့်ပွဲမှာဘဲ အနိုင်ရရှိသွားတာပါ။
၁၄။ Free Fire မှာ သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းချင်ပါသလား? Diamond ၃၉၀ ကို အသုံးပြုဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
၁၅။ Free Fire မှာ Antonio၊ Miguel ၊ Moco နှင့် Kelly တို့ ပါဝင်တဲ့ T.R.A.P လို့ခေါ်တဲ့ အွန်လိုင်း Band ရှိပါတယ်။
၁၆။ Jaguar Dance Emote ကတော့ ၂၀၀၇ မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ The Simpsons Movie က Homer က ဇတ်၀င်ခန်းတစ်ခုမှာ ပြုလုပ်ထားပုံကို အခြေခံထားတာပါ။
၁၇။ Lobby ထဲမှာ သင် လက်နက်တွေ အားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်တာသင်သိပါသလား?
၁၈။ The Purgatory Map က Zip Line ကို ပိုဖော်ပြပြီး Zone ကို ရွေ့လျားစေဖို့ ပိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။
၁၉။ ခွေးလေး Shiba လေး ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး ခွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
၂၀။ Andriod Emulators တွေ အသုံးပြုပြီး Free Fire ကို PC သို့မဟုတ် လပ့်တော့ မှာ ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ ပို
၂၁။ Frying Pan (ဒယ်အိုး) ကို ဘယ်ကျဥ်မှ မဖောက်နိုင်ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
၂၂။ Airdrop က Safe Zone ရဲ့ အလယ်မှာ ကျတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားပါ ၊ Airdrop နဲ့ တိုက်မိရင် သင်သေနိုင်ပါတယ်။
၂၃။ Smoke Wall တွေက သင် ယာဥ်တွေနဲ့ မတိုက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
၂၄။ သင်က ကာတွန်းကြိုက်နှစ် သက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား? ဂိမ်း၀က်ဆိုက် မှာ Free Fire Comics တွေကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Free Fire အကောင့်ကို Codashop နဲ့ သာဖြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ပိုမို စိတ်ချ မြန်ဆန်တဲ့ ငွေ့ဖြည့်ပြီး ငွေပေးခြေမှုများစွာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleMakeasplash with these -themed skins!
Next articleSEE: VALORANT’s ရဲ့ မြေပုံ အသစ်ဖြစ်တဲ့ Breeze ကတော့ အ၀ေးပစ်တဲ့ လူတွေဖို့ အကြိုက်ပါဘဲ